कसले ठोक्यो डनलाई गोली ?
HomeAparadh Khabarकसले ठोक्यो डनलाई गोली ?
काठमाडौं । रक्सी आएपछि सबैभन्दा ठूलो डन
आ फूलाई ठान्ने राजधानीका गुण्डा दावा लामामाथि गत साता एक अज्ञात व्यक्तिले गोली ठोक्यो । गुहेश्वरी नजिक रहेको दिब्या पार्टी प्यालेसमा पाखुरा फुलाउन पुगेका लामा गाडी पार्कीङ गरेर हलको गेट छिर्न लाग्दा गोली प्रहार भएको थियो र उक्त दृश्य सिसीटिभी क्यामराले समेत कैद गर्न भ्यायो ।
पछाडीबाट प्रहार भएको तीन गोली मध्ये दुई गोलीले लामाको आन्द्रा छिया छिया पार्यो । लामा अहिले उपचारको क्रममा अस्पतालमा छन् उनको अबस्था सामान्य छ, तर एक साता बित्दा पनि प्रहरीले गोली के कारण चल्यो र कस्ले प्रहार ग¥यो भन्ने केही पत्ता लगाउन सकेको छैन् । ‘विभिन्न कोणबाट प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ’, अपराध महाशाखाका एक डिएसपीले भने, ‘सुटर चाँडै फन्दामा पर्छ ।’
गोली प्रहार भएकै आधा घण्टा नबित्तै महानगरीय प्रहरी परिसरका एसएसपी छबिलाल जोशीलाई फोन आयो, दावा माथि गोली मैले चलाउन लगाएको हो, घटनाको जिम्मा लिन्छु नाम हो लोप्साङ राई । प्रहरीले उसको कुरो पत्याउने कुरो नै भएन । आफ्नै ढंगले अनुसन्धान सुरू गरेपनि दुई साता बित्दा सुटरको केही पत्तो छैन । स्रोतका अनुसार बिभिन्न झगडामा मुछिदै आएका लामाको सुपारी दिएको अनुमान पनि प्रहरीले गरेको छ । उनको एक महिना अगाडी दरबारमार्गमा डेभाजु डिस्कोका सञ्चालक राम गिरी, दुई बर्ष अगाडी ललितपुरका राजन श्रेष्ठको लफडाको बिषयलाई लिएर समेत प्रहरी अनुसन्धानमा जुटेको छ ।
व्यापारीको रूपमा चिनिने तर गुण्डा खेलाउने श्रेष्ठले दारू पानी खाएको बेलामा दावालाई कुनै दिन ठिक नलगाई नछाड्ने भन्ने गरेको स्वम् प्रहरी अधिकृत नै बताउँछन् । उता आफूलाई मै हुँ भन्ने र प्रहरीलाई युवती सप्लाई गरेकै भरमा दलाल प्रहरीका प्यारा भाई गिरीले पनि लामालाई सबक सिकाउने कसम नै खाएको स्रोतले भन्यो । उता दशक देखि लामाको ज्यानी दुश्मनका रूपमा चिनेनी प्रहरी ईन्काउन्टरमा मारिएका कुमार श्रेष्ठ उर्फ घैटेका मित बाफलका अर्का गुण्डा नाईके समिरमान सिंह बस्नेत पनि लामा सिध्याउने मनस्थितमा थिए । श्रेष्ठ र गिरी पनि बस्नेत निकट हुन् । यहि समुहको योजना मुताबिक कतै लामा माथि गोली प्रहार त भएन भन्ने तिर पनि प्रहरीले अनुसन्धान सुरू गरेको स्रोत बताउँछ ।